Fampianarana mahafinaritra 100 ho an'ity Krismasy (III) | ity Famoronana an-tserasera
Fampianarana mahafinaritra 100 ho an'ity Krismasy ity (III)
Fran Marin | | sary, Photoshop
Tsy misy fanehoan-kevitra
Ny endrika Krismasy tsara dia manana hery hahatonga antsika hahatsapa ho toy ny fianakaviana, ao an-trano ary manondro anay ny hafanan'ny trano. Mampahatsiahy antsika vetivety ny fahitana hitantsika tamin'ny fahazazan'ireto mpanjaka ireto izay nitondra fanomezana, ny zaridaina misy lanezy na ny am-patana nirehitra tamin'ny alin'ny Noely. Ny Krismasy dia iray amin'ireo daty izay natao ho fialan-tsiny hahatsapa ho kely indray ary ho lasa zaza kely, maninona ary. Ho fanampin'ny zava-kanto ara-nofo rehetra izay nitombo manodidina ireo daty ireo, ny Krismasy dia manana andraikitra tena mahaliana ao amin'ny fiarahamonintsika ary koa amin'ny fomba fijery psikolojika. Miara-mivory ny fianakaviana toy ny taloha, ary ny lohahevitra rehetra resahina dia toa mipetraka tsara (angamba ho tafahoatra amin'ny fahatsapana fihetseham-po aho, fantatro). Heveriko fa ny lahasa lehibe indrindra amin'ny Krismasy dia ny miala andro vitsivitsy amin'ny rafitra sosialy izay noforonina tany amin'ny tanàna lehibe ary manome lanja izay tena misy lanja: fianakaviana, namana ary fotoam-pifaliana. Na tsia? Fampianarana 100 fampianarana 100 famerenana 100 fampianarana 100 an-tsipi-pianarana 100 torolàlana
Na izany na tsy izany, anio dia hamela anao fanomezana kely (na lehibe miankina amin'ny fahitanao azy). Andianà fampianarana Illustrator sy Photoshop ary lesona an-tsary hianarana ny fomba hamoronana sary tsara sy kompositions tsara. Raha misy olana amin'ireo rohy dia fantatrao, hevitra. Ankafizo ireo fampianarana ireo ary mazava ho azy fa Krismasy!
Ny atin'ny lahatsoratra dia manaraka ny fitsipiky ny etika fanonta. Raha hitatitra tsindry diso eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » sary » Fampianarana mahafinaritra 100 ho an'ity Krismasy ity (III)
Mety ho liana ianao
Aoka ho voalohany ny fanehoan-kevitra
Avelao ny hevitrao Hanafoana valiny
Ny adiresy email dia tsy ho namoaka. Mitaky saha dia marika amin'ny *
elektronika namany Sary *
Manaiky ny fepetra momba ny tsiambaratelo *
Tompon'andraikitra amin'ny data: Miguel Ángel Gatón
Tanjon'ny angona: Control SPAM, fitantanana hevitra.
Legitimation: Ny fanekenao
Fifandraisana momba ny angona: Tsy hampitaina amin'ny antoko fahatelo ny angona raha tsy amin'ny adidy ara-dalàna.
Fitehirizana angona: Database nomen'ny Occentus Networks (EU)
Zo: Amin'ny fotoana rehetra, azonao atao ny mametra, mamerina ary mamafa ny mombamomba anao.
Te handray ilay gazety aho
Ny dingana lehibe 4 hanamboarana sary misy sary hosodoko nomerika
Tranokala template CSS 2 sy HTML5 maimaim-poana
Vaovao amin'ny mailakao
Raiso ny vaovao farany avy amin'ny Creativos Online amin'ny mailakao
Manaiky ny fepetra ara-dalàna aho
Avy amin'ny mac aho
Vaovao momba ny gadget
Ireo mpamaky rehetra
Avy amin'ny Linux
Vaovao momba ny moto
Mombamomba ny mpanoratra